Kulankii Madaxda IGAD: Maxaan ka Faa’iidney? | Home/Wararka | somaanta
Kulankii Madaxda IGAD: Maxaan ka Faa’iidney?
Abaara 8:40 ayaan saaka soo raacay Gaari Gaadiidka Dadwaynaha ah markaan wax yar soconey ayuu sheegay wadihii baabuurku in Wadooyinku welli sidii u xiran yihiin uuna marayo halkii suurtagal ah, mid ka mid ah dadkii rakaabka ahaa ayaa yiri. “War ileen tanoo kale, maxaa saakana loo xiray Wadooyinka? sow shirkii IGAD ma dhamaan?” Nin shirka gaariga saaraa oo sheekada xiiso u qabey ayaa intuu soo jeestey yiri. “Adeer Heshiiska la gaarey waxaa ku jirta in Qaadka Magaalada la keeno”
Islaan da’ dhexaad ah ayaa soo boodey oo tiri. “Heshiiskii ma waxa uu noqday in Qaadka naloo keeno oo kaliya mise wax kalaa jira”. Darawalkii gaariga ayaa yiri. “Heshiiska qodobo badan ayaa ku jirey oo xitaa waxaa laga wada hadlay in la fududeeyo diyaaradaha rakaabka ah ee gaariza ku dega inta aanay Nayroobi gaarin”.
Dad badan ayaa iswaydiinaya waxa Madaxwaynaha Soomaliya Xasan Sheikh Maxamuud ku xanbaari waayey in Qaadka oo aan faa’iido u lahyn Soomaalida dhibaato mooyaane uu calal aqal u dhaafsan waayey wax muuqda oo Soomaalida u cuntama. Si kastaba marka laga yimaado in Soomaaliya Marti geliso Shirka Madaxda IGAD, waxaa ka faa’iidey ilaa iyo hada Xukuumadda Kenya oo kaliya waxa uuna saacado kadib ka hir galay dhinaca Soomaliya, Kenyana waxaa la quuddaraynayaa in uu ka dhaqan galo ku dhowaad Boqol Maalmood ka dib hadiiba ay Ogolaadaan ama Daacad ka yihiin
Published: 2016-09-15 11:42:19